Philips Curler HP8600/40 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Curler HP8600/40
Philips Curler HP8600/40
Natural bouncy curls in an easy way. Get exactly the natural curly look you want with the SimplySalonCurl. A 32mm curling tong and ceramic coating sets this curling iron apart from the... [Learn more]
Brand: PHILIPSSKU: 71701N/ASee more: New Arrivals, Philips, Products, Shop, Under 100kFilter by:
Natural bouncy curls in an easy way. Get exactly the natural curly look you want with the SimplySalonCurl. A 32mm curling tong and ceramic coating sets this curling iron apart from the rest.
သဘာဝအတိုင်းခုန်ပေါက်လှုပ်ခါနေတဲ့ ဆံနွယ်ကောက်ကောက်လေးတွေကို အလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်စေမဲ့ Philips Curler ဆံပင်ကောက်စက် ဖြစ်ပါတယ်။ 32mm ရှိတဲ့ဆံပင်ကောက်ညှပ်နဲ့အတူ ကြွေသားအလွှာ ဖုံးအုပ်ပေးထားတာကြောင့်အခြားဆံပင်ကောက်စက်တွေနဲ့ ကွဲပြားသွားစေပါတယ်။ SimplySalonCurl နဲ့ သင်လိုချင်တဲ့ဆံပင်အကောက်ပုံစံ အတိအကျအတိုင်း သဘာဝကျကျ ဖန်တီးပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ လှပတဲ့ဆံနွယ်အခွေအလိပ်နဲ့ လှိုင်းတွန့်လေးတွေ ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် အလတ်စားအရွယ်အစားရှိတဲ့ဆံပင်ကောက် Iron တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ 32 mm ဆိုဒ်က ဖက်ရှင်ကျတဲ့ ဆံနွယ်အခွေအလိပ်နဲ့လှိုင်းတွန့်တွေဖန်တီးဖို့ ဆံပင်ပညာရှင်တွေအားလုံးရွေးချယ်ကြတဲ့အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ 180°C ရှိတဲ့ အပူချိန်က သင့်ရဲ့ဆံပင်ပုံစံကို သင်ကိုယ်တိုင်အလှပဆုံး ပြုပြင်နိုင်စေပါလိမ့်မယ်။ ဆလွန်းကနေ ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ လက်ရာအလားထင်မှတ်မှားရလောက်တဲ့အထိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆံပင်အကောက်ဒီဇိုင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။အာမခံသက်တမ်း နှစ်နှစ် အထိ ပေးထားတဲ့အတွက် ရေရှည် စိတ်ချလက်ချ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
2mm tong for beautiful curls and waves
This item: Philips Curler HP8600/40 K39,000